ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်၏ပြောကြားချက်အပေါ် မြန်မာကန့်ကွက် | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်၏ပြောကြားချက်အပေါ် မြန်မာကန့်ကွက်
Writen by Tachileik News Agency 9:25:00 AM -0Comments
မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ မလေးရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်က သတင်းမီဒီယာများသို့ ပြောကြားချက်အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံက လက်မခံကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားသံအမတ်ကြီးအား မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃၁)ရက်နေ့တွင် ကန့်ကွက်ပြောကြားလိုက်သည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ဝန်ကြီးချုပ်၏ မကြာသေးမီက သတင်းမီဒီယာနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား နိုင်ငံသားပေးသင့်ကြောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ နယ်မြေပေးသင့်ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့မှုအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က ကန့်ကွက်ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူက ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Zahairi Baharim အား ဇူလိုင်လ (၃၁)ရက်နေ့ ညနေ (၃)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၏ ဧည့်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်၏ပြောကြားချက်များသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အသိုက်အဝန်းများအကြား သဟဇာတဖြစ်မှုအတွက် ရေရှည် တည်တံ့မည့် အဖြေရရှိရန် မြန်မာအစိုးရနှင့် အာဆီယံတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုများကို အထောက်အကူမပြုသည့်အပြင် တစ်နိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မပြုရန်နှင့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို လေးစားလိုက်နာရန်ဟူသော အာဆီယံ၏ မူဝါဒများကိုလည်း သွေဖည်ရာရောက်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများ ဖြစ်ပွားနေသည်ဟူသော တစ်ဖက်သတ် စွပ်စွဲပြောကြားမှုများမှာလည်း အပြုသဘောမဆောင်သည့်အပြင် အာဆီယံပဋိညာဉ်ပါမူဝါဒများကိုလည်း ချိုးဖောက်ရာရောက်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လက်မခံကြောင်း ကန့်ကွက်ပြောကြားခဲ့သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ရခိုငျပွညျနယျအရေးနှငျ့ပတျသကျ၍ မလေးရှားဝနျကွီးခြုပျ၏ပွောကွားခကျြအပျေါ မွနျမာကနျ့ကှကျ
မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ပတျသကျ၍ မလေးရှားနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျက သတငျးမီဒီယာမြားသို့ ပွောကွားခကျြအပျေါ မွနျမာနိုငျငံက လကျမခံကွောငျး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ မလေးရှားသံအမတျကွီးအား မွနျမာနိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာန အမွဲတမျးအတှငျးဝနျက ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဇူလိုငျလ (၃၁)ရကျနတှေ့ငျ ကနျ့ကှကျပွောကွားလိုကျသညျ။
မလေးရှားနိုငျငံ၊ ဝနျကွီးခြုပျ၏ မကွာသေးမီက သတငျးမီဒီယာနှငျ့တှဆေုံ့စဉျ ပွောကွားခဲ့သညျ့ မွနျမာနိုငျငံအစိုးရအနဖွေငျ့ ရခိုငျပွညျနယျမှ နရေပျစှနျ့ခှာသူမြားအား နိုငျငံသားပေးသငျ့ကွောငျး၊ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရ နယျမွပေေးသငျ့ကွောငျးနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံတှငျ အစုလိုကျအပွုံလိုကျ လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုမြား ဖွဈပျေါနကွေောငျး ပွောကွားခဲ့မှုအပျေါ မွနျမာနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန အမွဲတမျးအတှငျးဝနျက ကနျ့ကှကျပွောကွားလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။
အဆိုပါကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ အမွဲတမျးအတှငျးဝနျ ဦးမွငျ့သူက ရနျကုနျမွို့အခွစေိုကျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ မလေးရှားသံအမတျကွီး H.E. Mr. Zahairi Baharim အား ဇူလိုငျလ (၃၁)ရကျနေ့ ညနေ (၃)နာရီအခြိနျတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ အမွဲတမျးအတှငျးဝနျ၏ ဧညျ့ခနျးမ၌ တှဆေုံ့ခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
မလေးရှားဝနျကွီးခြုပျ၏ပွောကွားခကျြမြားသညျ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ တညျငွိမျအေးခမျြးမှု၊ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှုနှငျ့ အသိုကျအဝနျးမြားအကွား သဟဇာတဖွဈမှုအတှကျ ရရှေညျ တညျတံ့မညျ့ အဖွရေရှိရနျ မွနျမာအစိုးရနှငျ့ အာဆီယံတို့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနမှေုမြားကို အထောကျအကူမပွုသညျ့အပွငျ တဈနိုငျငံ၏ပွညျတှငျးရေးကို ဝငျရောကျစှကျဖကျခွငျး မပွုရနျနှငျ့ အခြုပျအခွာအာဏာပိုငျဆိုငျမှုနှငျ့ နယျမွတေညျတံ့ခိုငျမွဲမှုကို လေးစားလိုကျနာရနျဟူသော အာဆီယံ၏ မူဝါဒမြားကိုလညျး သှဖေညျရာရောကျနကွေောငျး ပွောကွားခဲ့သညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ လူမြိုးတုံးသတျဖွတျမှုမြား ဖွဈပှားနသေညျဟူသော တဈဖကျသတျ စှပျစှဲပွောကွားမှုမြားမှာလညျး အပွုသဘောမဆောငျသညျ့အပွငျ အာဆီယံပဋိညာဉျပါမူဝါဒမြားကိုလညျး ခြိုးဖောကျရာရောကျသညျ့အတှကျ မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ လကျမခံကွောငျး ကနျ့ကှကျပွောကွားခဲ့သညျဟု မွနျမာနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနက သတငျးထုတျပွနျခကျြအရ သိရသညျ။